UOS, iyo Chinese distro inoenderana neDepin iyo yavanofunga kutsiva nayo Windows | Linux Vakapindwa muropa
UOS, iyo Chinese distro inoenderana neDepin iyo yavanofunga kutsiva nayo Windows
Kubva kutanga kwehondo yekutengeserana pakati peChina neUnited States, vanhu veChina vakatanga kutora musangano kukurudzira kushandisa yewemuno matekinoroji, Uye zvakare, kubvira gore rapfuura, manejimendi ehurumende akagamuchira mirairo yekubvisa zvese Hardware uye software yakagadzirirwa kunze kwenyika mukati menguva yemakore matatu.
Naizvozvo, zvirongwa zvakatenderedza kugadzwa kwenzvimbo inoshanda yenyika zviri kuwedzera uye nazvo unified operating system yakavhurwa Linux kwavanayo inonzi "UOS", iyo yakavakirwa pana Deepin. Muchokwadi, yekutanga yakagadzika vhezheni yeUOS Linux yave ichiwanikwa kubva munaNdira uye inoenderana neyamakumi maviri vhezheni yeDainin.
WOW, mhedzisiro yekutora kweWuhan Deepin Technology (iyo kambani iri kuseri kwe Deepin Linux) kubudikidza Union Tech, mubatanidzwa unounza pamwechete makambani ehurumende eChina neWuhan Deepin Technology.
Zvinozivikanwa kuti Linux iri kutambura kuti ikunde pane desktop uye iri chaizvo pane ino cherechedzo kuti avo vane basa reUOS Linux vakatarisa kuvandudza kwavo.
Union Tech boka rinogadzirisa huwandu hwezvikanganiso izvo zvinozivikanwa kuve chikamu chezvikonzero nei Linux isingakwanise kuzvisimbisa pachayo mumunda wedesktop anoshanda masystem. Nokuburitswa kweUOS Linux (kana Deepin Linux v20), muparidzi anoona kuti iyo sisitimu inoshanda inowirirana nema processor kubva kune vagadziri vemuno vakaita saLongsoon uye Sunway.
Iyo manejimendi inovavarira kuona kuti iyo yekupedzisira yakaiswa pamakomputa akashongedzerwa neaya maprosesa uye achiendeswa kune vashandisi.
Union Tech inofungidzira system boot nguva kusvika kumasekondi makumi matatu pamapuratifomu aya. Uye zvakare, iro boka rinozivisa kudyidzana nemakambani akadai saHuawei kuti aone iyo sisitimu yekushandisa yakaiswa nekusarudzika pamalaptop avo.
Iri zano rinotarisira kuti iyo sisitimu yekushandisa iwedzere kufarirwa mudzimba uye nemaitiro anogona kuve nemhedzisiro yakanaka kune anoshanda system pasirese pasiti.
Izvi, mune chero zvazvingava, izvo izvo vanogadzira kuseri kwekufamba vanotarisira kuratidza kuti China inogona zvakare kutumira kunze mashandiro akanaka masisitimu.
Maererano neUnited Tech, iyo inoshanda sisitimu inosangana nezvinodiwa zvezuva nezuva pane desktop, kunyangwe isingaenderane neakawanda software yehunyanzvi.
“National operating system yave kuda kugadzirira. Haisati yave 100% kutsiva, asi yatove inosangana nezvinodiwa zvakakosha zvemushandisi. Kugamuchirwa kwayo kuchave chikamu chekufamba zvishoma nezvishoma, "akadaro Liu Wenhan, maneja mukuru weUnion Tech.
Zvichitaurwa zviri nyore, UOS ndeyekutengesa kweLinux kuChina. Basa guru rekuvandudza rinoitwa neboka reDelin uye hukama pakati peUOS neDepin hwakafanana neyaFedora naRedhat RHEL.
Saka chaizvo Deepin ibhuku renharaunda uye haizotsiviwa neUOS, iyo inoshandiswa chete mukutengesa zvinangwa.
Iyo UOS uye Deepin V20 masisitimu anogadzirwa akafanana uye mazhinji emabasa uye maraibhurari ezvekushandisa akafanana. UOS yakavakirwa pane Deepin system, saka Deepin system ichawana zvimwe zvekuvandudzwa pakutanga uye zvigadziriso zveUOS zvinononoka asi zvichazowana rutsigiro ruzere rwekutengesa.
Chekupedzisira, zvakakoshawo kuti uzive izvo Iyi sisitimu haisi iyo yega inoitirwa kurongerwa mudunhu reChinese kubvira gore rapfuura China Standard Software Co., Ltd uye Tianjin Kylin Ruzivo Ltd. Co (maviri maChinese software vaparidzi vane hukama hunozivikanwa kuhurumende) Ivo vauya pamwe chete nechinangwa chimwe chete: kugadzira yenyika inoshanda system.
Tianjin Kylin Information Ltd. Co ndiye muvambi weKylin, sisitimu yekushandisa yakagadziridzwa (yakavakirwa paFreeBSD) yemauto eChina uye yakatanga kuunzwa muna 2007 neChina Standard Software Co, Ltd yechikamu chayo chiri kumashure kwaNeoKylin, chigadzirwa kubva mukudyidzana. pamwe neNational Defense University Technology.
CS2C uye TKC planean gadzira kambani nyowani mavanove vanozoita mari. Zviri mukati iyo yekupedzisira ichavandudza mashandiro ayo. Iyo kambani nyowani inobata kuvandudzwa kweiyo nyowani yekushandisa system, tekinoroji sarudzo, kushambadzira, brand management, mari uye kutengesa. CS2C neTKC vaive nechibvumirano chemuromo pachirongwa chekudyara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » UOS, iyo Chinese distro inoenderana neDepin iyo yavanofunga kutsiva nayo Windows
Uye nei vasingashandisi generic imwe uye kuwedzera chip yavo uye kugadzirisa kwenzvimbo kwazviri. Ini handinzwisise yavo yezvematongerwo enyika modhi. Pakupedzisira ibhizinesi semazuva ese.
Pocholo uye BorjaMari akadaro
Zvakanaka, kana iwe uchifunga kushandisa DEBIAN yakadzika sehwaro hwekugadzira sisitimu inogadzirwa muChina, inokupa rimwe basa rekuwedzera. Revers engineering ye kernel iyo yakavhurwa sosi uye yemahara? Akangwara kwazvo kana mumwe munhu asina kunzwisisa chinhu zvakanaka (pamwe menda Lerenda).
Kune rimwe divi, 30 masekondi ebhutsu haaratidzike senge feat kwandiri, asi zvinonetsa mune zvemazuva ano Hardware.
Pamwe zvaunowana zvisiri izvo kana zano uye budiriro ibasa raPaquirrín ..
Pindura Pocholo uye BorjaMari
.Iso inogona kuwanikwa kupi?